MISCANTHUS (FAN) SHIINE: SIFOOYINKA DHULKA OO KA TAGAYA DHUL FURAN - SOOSAARKA DALAGGA
Horumarinta khibrad shiineed shiineys ah: beeritaanka iyo daryeellidda firida firaaqada
Sii darnaa qurxinta Hadda waxay noqotaa mid caan ku ah beerta. Koritaanka, waxay sameeyaan daaho qurux badan, waa wax sida baadiyaha ah. Soo jiidasho leh, sababtoo ah waa daa'in warshad u-adkeysi leh. Mid ka mid ah wakiilada qoyskan Shiinaha shiinaha, taas oo ay ku jiraan noocyo kala duwan oo soo jiidasho leh. Aynu sii hadalno oo ku saabsan beeritaanka iyo daryeelidda dhaqankan.
Warshad ku jirta hab nololeedka dabiiciga ah waxay ku nooshahay dhererka guud ee gobollada Bariga Dhexe ee Aasiya, Japan, Kuuriya iyo Ruushka. Wuxuu ku koraa kabaha furan, buuraha buuraha ilaa bilawga buurta hoose. In kudhaca jiilka si fiican ayuu u badiyaa. Tani waa baadiyaha weyn ee cawska ah oo gaari kara 3 mitir dhererka. Celceliska dhererka dhaqanka ee hal mitir ilaa laba iyo badh. The afkoda toosan, at ugu hooseysa ee xididka leeyihiin caleemaha leathery qaabka miisaanka. Caleemaha, kuwaas oo koraayo xaq on caleemaha, waa mid aad u dheer, ee dhexda waxaa jira feeraha, oo ku saabsan a centimeter ballaaran, aad u adag, oo leh qallayl. Sababtoo ah noocyada kala duwan ee noocyada waxaa jira midabyo kala duwan.
Marka laga soo tago misguero-ga, dhirta dhaxanta u adkaysta waxay kaloo yihiin: lilac, spirea, cowska cad, barberry, ash buur (casaan), viburnum, iyo cherry duurjoogta ah.
Duufaan xayawaan ah, sida caadiga ah, oo jajab leh, laga bilaabo 10 illaa 30 cm dheer, waxay ka kooban yihiin barafado hal-caleemo ah lugaha, wax yar ka yar hal mitir oo dherer ah. Inflorescences waxay u dhexeeyso berrito ilaa cad, iyadoo ku xiran noocyada kala duwan.
Warshadu waxay leedahay nidaam xidid aad u awood badan, taasoo si weyn u koraysa. Shiinaha Miscanthus waxaa sidoo kale loo yaqaan xayawaan ama magaalo Shiineys ah, oo ka soo jeeda Giriigga magacu wuxuu u turjumayaa "ubax lugta", magaca botanical - Miscanthus sinensis.
Kala duwan noocyo kala duwan oo shiineys ah oo shiineys ah, oo maanta ah in ka badan boqol, ayaa si caan ah u isticmaala isticmaalka sirqoollada dhirta. Iyadoo ku xiran kala duwanaanta iyo waqtiga sanadka, caleemaha iyo inflorescences waxaa lagu soo bandhigaa noocyo kala duwan oo midabyo ah. Haddii goobta ay leedahay noocyo dhowr ah oo misgupresso, waxay u egtahay mid aad u cajiib ah. Next, tixgeli sawirada iyo sharaxaada qaar ka mid ah kuwa ugu caansan ee bannaanka u.
Waxyaabaha kala duwan Iftiinka Morning (Morning Light), taas oo ka yimaada Agoosto ilaa dhammaadka Oktoobar. Caleemaha adag waxay ku dhacaan hoosta waxayna u egyihiin ilo. Guga iyo xagaaga waa cagaar, iyo xilliga dayrta waxay noqon karaan kuwo dhalaalaya oo huruud ah ilaa burgundy. Florescences Bloom dhamaadka xagaaga iyo at ugu horeeyay ee casaan-macenta, iyo ku dhowaad xilliga dayrta waxay noqdaan bunni jilicsan. Iyadoo aan la qabin ciidda, waxay jeceshahay cusub aan lahayn ciid iyo dhoobo. Waa qabow u adkaysta, kori kara aagga shanaad.
Kala sooc Blondo aad u dheer. Cawska cawska wuxuu noqon karaa in ka badan laba mitir oo sare. Waxaa ubaxyada ubaxyada leh ee ubaxyada ugu dhow laga bilaabo xagaaga hore ilaa xilliga dayrta. Caleemaha waa cidhiidhi, adag, cagaar madow. Kala duwanaanshahan shiinaha ee Shiinaha waa mid ku habboon beerista gobolka Moscow, maaddaama ay u dhaxeyso hoos udhaca -34 ° C wuxuuna ka tirsan yahay aagga afaraad.
Miscanthus chinese Flamingo ayaa iska leh noocyo dhexdhexaad ah oo dhif ahna wuxuu ku koraa 1.8 mitir ee dhererka. Magaciisa waxaa u sabab ahaa ubaxyada casaanka ah ee ubaxa ah ee ubaxyada hore ee xagaaga. Caleemuhu waa adag yihiin, cagaar madow oo midab leh, taas oo ilaalisa ilaa dayrta goor dambe. Kala duwan ayaa caan u ah bannaanka sababtoo ah kala duwanaanta midabka, caqligal nalalka iyo caabbinta barafka wanaagsan. Waxay ka tirsan tahay aagga afaraad waxayna qaadataa dhaxan ilaa -28 ° C.
Graziella (Graziella) waxaa loola jeedaa noocyo, dherer dhexdhexaad ah oo kori kara ilaa hal mitir iyo badh iyo ilaa mitir ahaan ballaaran. Caan ku ah xaqiiqda ah in dayrta caleemaha iyo afkoda noqdaan midabka copper leh taabasho ah orange ah. Waxay bilaabmaysaa in ay ubaxdo bisha Luulyo waxayna dhammaataa bisha Agoosto, ma jecla inay hoos u dhacdo, waxay ku baxaan oo kaliya meelo furan halkaasoo uu jiro qorraxda badan. Noocaanyadu waxay jecel yihiin carrada leh qoyaan badan, halkaas oo ay si fiican u horumariso. Xilliga xagaaga ee qallalan waxaa lagama maarmaan ah in la biyaha. Ka ilaaliyaa dhaxan ilaa -28 ° C.
Taageerada Shiinaha Gracillimus wuxuu gaaraa dhererka laba mitir, sidaas darteed, waxaa loola jeedaa darajooyinka sare. Waxuu ku jiraa xilliga dabayaaqada Juun ilaa dhammaadka Agoosto iyadoo la isticmaalayo burooyin naxaas ah. Caleemaha maqnaashaha dheer, ilaa 1.5 cm ballaaran, xagaaga ee midabka cagaaran cufan, dayrta waxay heli kartaa casaan, casaan iyo jaale huruud ah. Waxay si fiican u koraan carrada qoyan ee aan lahayn dhoobo, meelo qorrax leh, cabsida dabaylaha. Wuxuu u baahan yahay hoyga xilliga qaboobaha, u wareejinta dhaxan-28C °.
Kala duwanaan aan caadi ahayn Strictus (Strictus). Oo muuqashadiisuna waxay u eg tahay shabag. Dhammaan sababo la xiriira xaqiiqda ah in caleemaha adag ay ku kala firirsan yihiin xarkaha cad. Waxay yihiin kuwo cagaaran dhalaalaya, adag, ilaa illaa mitir cabbir oo toosan. Xilliga dayrta, waxay ka mid yihiin midab jaalle ah ilaa burgundy. Ubax cadaan leh casaan, ilaa 0.7 cm Bloom dheer ee October iyo sii wadaan in ay Bloom ilaa dayrta goor dambe. Dhirta ayaa si fiican u ubaxday qorraxda, ugu badan ee hooska qayb ahaan, ma jecla carrada leh ciid iyo dhoobo. Waxay u adkeysan kartaa heerkulka ilaa 28 ° C, dhirta yar yar waxay u baahan tahay in la dhigo meel lagu hayo jiilaalka.
Ma taqaanaa? Sanadkii 2001, noocyada kala duwan ee Shiinaha ee Strictus waxay heleen Abaalmarinta Bulshada Beeraha ee Boqortooyada Ingriiska sida dhar tayo sarre leh oo la awoodi karo.
Si wax ku ool ah on goobta beerta shiineyska Shiinaha ayaa fiirin doona Ferner Osten. Waxa laga yaabaa inuu yahay midka ugu quruxda badan dhammaan noocyada caanka ah ee dhirta. Caleemaha waa cagaaran xagaaga, iyo casaan, jaalle iyo bunni xilliga dayrta, waxay sameeyaan qaro weyn "cap". Waxay ku yar yihiin dhulka, waxoogaa in ka badan hal mitir oo ballaaran, dheer iyo adag. Marka barbaarinta waxaa kaliya oo kala diri, iyo tan, sida caadiga ah July, waa casaan ciriiri. Ilaa dhamaadka ubax, iyo tan tan ilaa bartamihii-dayrta, godadka waxay ka helaan midab madow oo casaan ah ilaa burgundy. Wakiilka noocan ah wuxuu jecel yahay inuu ku koro meelo qorrax leh, diirran, cabsida dabaysha. Wuxuu jecel yahay carrada aan qoyanayn. Waxay u dulqaadataa dhaxan hoos udhaca -28 ° C. Kala duwanaantu waxay noqon doontaa meel banaanka ah ee beertaada.
Waa muhiim! Qaar ka mid ah noocyada shiineyska ee Shiinaha ayaa aad u fiican marka la qulqulo ciidda, laakiin biyaha fadhiya waxay burburin karaan iyaga.
Doorashada goobta loogu talagalay sii kordhaya
Sida beerista dhirta kale ee ornamental, waxaa jira waxyaalo macquul ah iyo talooyin loogu talagalay beeritaanka habboon iyo daryeelida qaladaadka Shiinaha. Waxay ku billaabanayaan doorasho ah dhulbeereed.
Inta badan dhirtaas ma jecla inay hooska ka dhigaan, oo doorbidaan meelo cadceedu furan. Iyadoo aan qorraxda, waxay u koraan, laakiin ma Bloom. Waxaa jira noocyo qaar u dulqaadan kara penumbra, waxaad u baahan tahay inaad fiiro gaar ah siisid markaad dooranayso wax soo saar. Waa inay jirtaa meelo badan, maadaama uu yahay cawska dilka ah oo si fiican u koraya. Noocyo badan ayaa ka baqaya dabaysha, sidaas darteed waxaad u baahan tahay inaad doorato meel ka ilaalisa iyaga. Waxaa habboon in la fiiriyo isku darka isku dhafka dhirta kale. Dhammaantood waa wakiillo qurux badan oo firiley ah, soo jiidasho leh muuqaalkooda, sidaa daraadeed ma wadaagaan si aad u wanaagsan. Ku tali in ay ku fariistaan ​​"dhibco" qaybo kala duwan oo goobta ah.
Euphorbia, aster, Verbis, Veronica, Gaillardia, carnation, gelenium, hibiscus, gravilat iyo delphinium, iyo sidoo kale nacas ah, dhirta qorraxda-jecel, taas oo qadar weyn oo qorraxda abuuraa xaaladaha wanaagsan ee koritaanka.
Xayawaanka loogu talagalay musqusha
Dhaqanka waa ku filan aan qabin carrada. Dabcan, haddii ay suurtogal tahay, ciidda waa inay ahaato mid bacrin ah. Ha kugula talin dhirta dhulka, taas oo ka kooban dhowr dhoobo iyo ciid. Xaaladda ugu weyn ee noocyada ugu badan waa in ciidda waa in "hayn" qoyaanka si fiican. Carrabku wuxuu noqon karaa mid aad u badan, laakiin ma noqon karo qalalan. Sidaa darteed, waxaa la furfuray oo inta badan waraabiyo, gaar ahaan sanadaha ugu horreeya ee nolosha geedka.
Markaad beertid dhulgariir furan, waa muhiim in la ogaado qodobbada qaarkood si toos ah loo beerto iyo daryeelidda warshadda.
Si taxaddar leh u dooran mashiinka beerto
Warshadda waxaa lagu beeray qaybta. Taasi waa, baadiyaha weyn wuxuu u qaybsan yahay geedo iyo transplanted. Qeyb ka mid ah qaybaha kala duwan iyo qaybta ku-tallaalidda. Fasaxyada waxaa laga iibsan karaa xannaanooyinka, laakiin waxaad weli u baahan tahay inaad fiiro gaar ah u yeelato muuqaalka. Wixii beerto waxaad u baahan tahay inaad dooratid qof weyn, oo si fiican loo horumariyey. Dhirta waxaa la beeray oo la beeray oo keliya guga ama xagaaga hore, dhirtiisu waxay dhacdaa marka heerkulka hawadu soo socdo 25 ° C, waa inay lahaataa waqti ay ku qaadato xidid kadibna u adkeyso jiilalka si fiican. Mikantusa dhufan iyo abuur, laakiin sida caadiga ah, bannaanka u dhif ah u isticmaalaan habkan.
Warshadda waxaa lagu beeray daloolka, taas oo, sida laga soo xigtey talo bixinta beeralayda waayo-aragnimo leh, waa inay noqdaan saddex jeer nidaamka xididka geedka. Badanaa waa 20 sentimitir oo ballaaran iyo ilaa 30 qoto dheer. Waxaad ku dari kartaa ciidda bacriminta yar yar, sida compost, ka dib marka la isku daro dhulka. Roots waa in aan lala xiriirin bacriminta. Waxaad qoyi kartaa nidaamka xididka seedling ee xalka hydrogen peroxide marka la eego qiyaasta cabbir halkii litir oo biyo ah. Tani waxay xoojin doontaa oo ku dhajin doontaa oksijiinka. Sapling si tartiib ah ku rusheeyaa dhulka, fiiro gaar ah u hoygooda buuxa, waa in ay ahaataa meel 3-5 cm Ka dib markii laga beerto sapling U hubso inaad si weyn u biyo badan.
Waa muhiim! Rootiyada Shiinka ah ee Shiinaha ayaa si aad ah u xoogan, sidaas darteed iyaga waxaad u baahan tahay inaad xaddiddo wareegga wareegga, iyadoo lagu saleynayo ballaarinta geedka qaangaarka. Waa inay kor u kacdaa ilaa 15 cm oo qoto dheer iyo 10 dherer.
Sida jardiinka "xayawaanka" beerta, miskanthus wuxuu u baahan yahay daryeel gaar ah, laakiin dhab ahaantii ma aha mid culus mana u baahna waqti badan.
Dhaqanku wuxuu jecel yahay ciidda qoyan mana u dulqaadanayo abaar, sidaas darteedna wuxuu u baahan yahay waraabinta. Gaar ahaan waxay dalbanayaan geedo iyo geedo yar yar. Waa lagama maarmaan in la kormeero qallajinta ciidda iyo biyaha marka qalalan. Xaaladdan oo kale waa ka wanaagsan tahay inaad ku shubtid inta aadan ku shubin. Waraabinta waa lagama maarmaan marka qorrax dhaca, marka qorraxdu aanay ka badin ciidda. Haddii la waraabiyo qorraxda kulul, biyaha ayaa kuleylaya carrada, iyo iyada oo biyaha, tani waxay dhaawici kartaa geedka.
Sida caadiga ah, warshad dadka waaweyni uma baahna Bacriminta dheeraadka ah. Si aad isaga boogo, waxaad ku milicsan kartaa arrimo waxoogaa organic ah sida digada biyaha iyo ku shub. Wax kale - a sapling iyo duurka ubax yar yar. Ka dib markii la beero, ka dib markii muddo ah, waxaa lagama maarmaan ah in bacrimiya ciidda leh Bacriminta nitrogen, iyo wax yar ka dib Bacriminta potash-fosfate. Waxaad u baahan tahay inaad bacrimiso xalka, waxaa si fudud loo nuugo. Waxa ugu muhiimsan waa in la ogaado qiyaasta, sababtoo ah dhirtu waxay dhulka ku taalaa sababtoo ah xad-dhaaf ah nitrogen.
Xannaaneynta iyo daryeelka carrada
Si aad u dabciso dhulka waxaa lagu talinayaa dhirta dhalinyarada iyo geedo inta lagu guda jiro la qabsashada. Waa inaan sidoo kale ka saaraa cawska oo fara-geliya horumarka caadiga ah. Dhirta qaangaarka ah sidoo kale waxaa lagama maarmaan ah in la dabciyo ciidda, badanaa si looga fogaado biyaha taagan.
Noocyada in la koray ee cimiladeena waxay leeyihiin hardiness jiilaalka wanaagsan, laakiin dhirta dhalinyarada waxaa lagula talinayaa jiilaalka si ay u daboosho. Si tan loo sameeyo, isticmaal hababka kala duwan. Tusaale ahaan, waxay geliyaan filimka, meelo ka soo baxa dabaysha, ka dibna ku daboolaya boards ama lapnik. Waxaad si fudud u dabooli kartaa sphagnum, ka dib markaad daryeesho in aan la qaadin dabaysha. Si aad tan u sameyso, waxaad isticmaali kartaa kuraasta ama laanta la mid ah. Waxaa la ogaaday in dhirta qaangaarka ah ee shiineyska Shiinaha uma baahna hoy iyo, sida caadiga ah, u diiriyaan si fiican miro.
Waa muhiim! Caleemaha iyo caleemaha qallafsan uguma baahna in la jaro jiilaalka. Waxay u adeegaan xididdada qoyan iyo caawimaad si ay uga badbaadaan qabowga.
Raadi talooyinka ugu fiican ee ku saabsan abuurista iyo daryeelidda nacaybka furan.
Haddii khadadkaas si khaas ah loo beeray, waxay mar walba soo jiidan doonaan dhererkooda iyo midabada albaabada iyo caleemaha waqtiyada kala duwan ee sanadka.
Waxay yihiin balli fiican oo la qurxiyey, laakiin waxay u baahan yihiin in ayan beeran biyo.
Popular waa abuurista dhirta dhirta iyo xuduudaha, sababtoo ah cufnaanta sare ee duurka this cawska.
Waxa kale oo loo isticmaalaa sidii asalka dambe ee cagaarka ubaxa dhirta.
Waxyaabaha aan caadi ahayn ee cawska ubaxa ee sareeya waxay kordhineysaa isticmaalka sii kordhaya ee shiinaha Shiineeska ah ee dhirta. Warshadu waa wax aan dhammays tirnayn, markaa si taxadar leh ayay u jecel yihiin indhaheeda quruxdiisa sanado badan. Noocyada Shiinaha ayaa leh noocyo farabadan, sidaas darteed qof kastaa wuxuu heli doonaa inuu ku haboon yahay naftiisa.